A na-emelite Nsogbu Royale na asọmpi, kaadị 4 na ebe ọhụụ | Gam akporosis
Manuel Ramirez | | esere Royale, Egwuregwu gam akporo, Nkuzi
Supercell na Clash Royale na-apụ apụ ma ugbu a ọ na-aga nyekwuo PvP ohere na ihe ga-abụ egwuregwu. Wayzọ iji mee ka spikes dị n'etiti ụdị egwuregwu niile site na egwuregwu vidio nke ewusiri ike na ọnwa ndị na-adịbeghị anya na nke Supercell n'onwe ya kwuru banyere ya atụmatụ izu gara aga. Egwuregwu ndị elebara anya na-enye ndị egwuregwu na ezinụlọ dị iche iche nhọrọ ka ukwuu ebe ọ malitere ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmalite nke afọ.
Taa ọ weputara nwelite nke nwere asọmpi dị ka akụkụ bụ isi, mana anyị enweghị ike ichefu maka obere akụkọ ma na-eweta nke ha na nke ahụ bụ kaadị ọhụrụ anọ na ebe ọhụụ. Oyi kpọnwụrụ bụ ogige ọhụrụ nke meghere mgbe ọkpụkpọ rutere trophies 2.300. E wezụga ozi ndị a niile, anyị nwekwara ọtụtụ nkọwa na-ebuli ogo nke mmelite a na, yabụ, nke egwuregwu ahụ n'onwe ya. Supercell gara n'ihu na-ewelite akara maka mmelite nke egwuregwu a nke ghọrọ ihe ịtụnanya n'afọ a.
1 Asọmpi na Nsogbu Royale!
2 Kaadị ọhụrụ anọ, ogige ọhụrụ, na ndị ọzọ
3 Ezie egwuregwu
Asọmpi na Nsogbu Royale!
Supercell chọrọ tinye ngwoolu na asọmpi, ma n'ụzọ pụrụ iche na uru kasịnụ bụ na ị ga-egwu megide ndị egwuregwu ga-anọ na mpaghara oge gị. Nke a pụtara na ha bụ mpaghara, yabụ ị ga - ahụ onwe gị ka ị na - alụ ọgụ megide ndị egwuregwu niile si obodo gị iji gosipụta na ikike ndị ahụ enwetara megide ndị egwuregwu America ma ọ bụ ndị Korea ga - aba uru.
Egwuregwu nwere ihe pụrụ iche na nke ahụ bụ na ihe dị mkpa iji mepụta ha. Dabere na ego nke ihe bara nnukwu uru, ihe nrite ikpeazụ ga-aba uru ka ukwuu, yana ị nwere ike ịhụ ma ọ bụrụ na ị gbalịa imepụta otu, enwere ọtụtụ. Ọmụmaatụ, maka 250.000 bara nnukwu uru ihe nrite ikpeazụ bụ igbe nke ga-enye onye meriri n'asọmpị kaadị 15.000, kaadị nke 10.000 nye onye nke abụọ na 7.500 na nke atọ. Ndị egwuregwu 500 kacha elu ga-enweta ihe nrite site na ọnọdụ ha na leaderboard. Oge nke asọmpi a nwere ike ịbụ site na ọtụtụ awa ruo ọtụtụ ụbọchị yana oge nkwadebe nke minit 15 ruo awa 2.
Supercell amalitela webụsaịtị ebe ị nwere ike lee asọmpi kachasị dị egwu nke izu ma sonye na ha. Bịa ebe a iji gbalịa ịbụ otu n'ime ndị mmeri ahụ, ọ bụ ezie na ọ ga-abụ ihe siri ike n'ihi ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị egwuregwu nwere kaadị akụkọ.
Kaadị ọhụrụ anọ, ogige ọhụrụ, na ndị ọzọ
na kaadị anọ ndị ọhụrụ bụ ndị a:
Kaadi ohuru ohuru: Mmụọ Ice
Kaadị Epic Ọhụrụ: Nkume okwute
Kaadị Akụkọ Mgbe Ochie: Lumberjack na ndekọ
Ihe omuma ozo di iche na Clash Royale ohuru bu ntinye nke ohuru: Icy Peak na agbachi na trophies 2.300. Esonyela ihe ohuru ohuru na mmelite a iji kwughachi ndi egwuregwu ndi jiri otutu ubochi na ubochi na-anwa imeri mmeri ndi ahu nke gha enwe nnukwu onyinye.
Ozi ndị ọzọ metụtara TV Royale nke ga-egosi ugbu a karịa mgbe egwuregwu kacha mma nke egwuregwu ama ama ma ugbu a na ihuenyo agha. Na agha enyi, ị nwere ike ịhọrọ ugbu a mpaghara ịchọrọ ịlụ ọgụ ka ha bụrụ ihe na-atọ ụtọ ma nwee mmetụta ndị ọzọ.
Eziokwu ahụ akowaputara ihe nile na mmelite a ka ị gbakwunye nzacha iji hazie kaadị gị site na ebe egwuregwu, ụgwọ elixir ma ọ bụ site na mma. N'ikpeazụ, a na-ewebata ikike ịhụ ebe agha ikpeazụ ị lụrụ n'agha ọ bụla.
Nsogbu Royale anatawokwa mmelite na ngụkọta nke egwuregwu ndị na-elekwasị anya na kaadị ndị pere mpe ma bụrụkwa nyere Goblin Barrel ikike, ị mara, onye na-ulo oru site na isi na ihe nke sekọnd ha na-iti atọ goblins na ike dị ukwuu nke mmebi. Gbọmgbọm nke Goblins na-eri belata site na 4 ruo 3, oge nkesa dị elu site na 1 nke abụọ ruo 1,2, ma wepụrụ mmebi mebiri; Nnukwu Skeleton nwere mmebi ya mụbara site na 20%;
Can nwere ike ịgafe site na njikọ a ịmara mgbanwe ndị ọzọ. Anyị na-agba gị ume ka nwaa egwuregwu ndị ahụ, na nke ndị ahụ m hụrụ na ha juputararịị, opekata mpe na mpaghara Madrid.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Asọmpi dị ugbu a na Clash Royale gbakwunyere ebe ọhụụ na kaadị 4 ọhụrụ